QM75 – Fursad ay Soomaalidu Gacan uga Geysan karto Qaabeynta Arrimaha Hortabinta leh ee Adduunka
Ku Aqriso Af-Ingriis
--- Waa mabaadi' iyo ballanqaadyo lagu maamulo xiriirka ka dhexeeya dowladaha laguna ilaaliyo xuquuqda dadka meel kasta oo ay joogaan, iyada oo loo marayo Axdiga Qaramada Midoobay, Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha, iyo heshiisyo kale oo badan.
--- Waa koox caalami ah oo ka kooban hawlgallada, hay'adaha, Sanduuqyada, iyo barnaamijyada Qaramada Midoobay – oo ay si deeqsinimo leh u taageeraan deeq-bixiyeyaasha la-hawlgala – taasoo dowladaha ka caawisa inay gaarsiiyaan gargaarka bani'aadamnimada, waxbarashada, haqabtirka cuntada, horumarka, iyo sare u qaadidda maamulka, iyo faa'iidooyinka kale.
--- Ugu dambayntii, waa urur ka kooban 193 xubnood oo sh dowlado gobanimo leh oo madax-bannaan oo – iyagoo u maraya Golaha Loo Dhanyahay, Golaha Amaanka, iyo goleyaasha kale – ka go'aansanaya nabadda, amniga, horumarka, iyo arrimo kale oo badan oo mudnaan leh iyagoo matalaya beesh caalamka.
Soomaaliya iyo meelo kaleba, hay'adaha Qaramada Midoobay sida Ururka Caafimaadka Adduunka, Barnaamijka Cuntada Adduunka, Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay, Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ayaa caawiya malaayiin dad ah maalin kasta.
QM waxay la shaqeysaa dowladaha si dadka loo siiyo fursad ay ku helaan cunno, hoy, daryeel caafimaad iyo waxbarasho. QM waxay taageertaa abuurista shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah, waxay ka caawisaa ka hortagga iyo xallinta colaadaha, waxay dhistaa nabadda waxayna kobcisaa dib-u-heshiisiinta, waxayna dowladaha siisaa taageero wax ku ool ah oo ku saabsan arrimo fara badan - laga billaabo la dagaallanka musuqmaasuqa iyo awoodsiinta dadka naafada ah. Shaqadeeda waxay isugu jirtaa mid muuqata iyo mid aan la taaban karin.
Hindisahan oo loo yaqaano QM75 wuxuu ku saabsan yahay wada-hadal – oo Qaramada Midoobay ay rabto inay ku dhageysato waxna ka barato, iyo inay kala shaqeyso dadka iyo degaannada ugu badan ee kala duwan ee suurtagal ah. QM75 wuxuu dadka waydiinayaa meelkasta oo ay joogaan inay "ku soo biiraan sheekada" ayna soo bandhigaan fikrado wax looga qabanayo caqabadaha na horyaalla bulsho caalami ahaan.
Wadahadalkani waa mid si gaar ah waqtigiisa ku yimid waana mid habboon iyadoo Dowladda Federaalka iyo bahda QM ee Soomaaliya ay qeexayaan arrimaha hortabinta u leh howlaha hay'adda adduunka ee dalka shanta sanno ee soo socota iyadoo qayb ka ah Hanaankeena Iskaashi ee 2021-2025. Tani waxay suurtagelinaysaa in aragtiyada Soomaalida lagu biiriyo hababka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee Qaramada Midoobay.
Jawaab-celinta sahanka ka soo baxda adduunka oo dhan waxaa loo soo bandhigi doonaa madaxda adduunka iyo saraakiisha sarsare ee Qaramada Midoobay. Waxaa jiri doona kulan heer sare ah oo ay yeelanayaan Madaxda Dowladaha iyo Xukuumadaha oo loo qoondeeyay in lagu maamuso sanadguuradii 75aad 21ka Sebtembar. Dhacdadan, madaxda adduunku waxay isla qaadan doonaan bayaan siyaasadeed oo hor u socd ah oo ku saabsan 'Mustaqbalka aan dooneyno, Qaramada Midoobay ee aan u baahannahay: annagoo dib u xaqiijinayna ballanqaadkeena wadajirka ah ee iskaashiga dhinacyada badan.'